Creative Writing » ” မတူ ခြားနား ဘဝများ”	15
Ma Ma says: ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်၊ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေရင်တော့ ရင်လေးစရာပဲ။
YE YINT HLAING says: မြန်မာ တွေ (အထူးသဖြငိ့)ဗမာသွေး စစ်စစ်တွေ က ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုတွေ များတယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုရဲရင့်လှိုင်ရေ
Alinsett @ Maung Thura says: ကီးဘုတ်သူရဲကောင်းတွေ စုစည်းပြီး အားတစ်ခု ဖြစ်အောင်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အလင်းဆက်ရေ အချက်ကျကျ ပြောနိုင်ေ၇းနိုင်သူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ
အောင် မိုးသူ says: ဘ၀တွေက ဒီလိုပါပဲ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဘ၀ တွေ မတူ ဘူးဆိုတာ လက်ခံ ထားနိုင်ဘို့ အေ၇းကြီးပါတယ်
kai says: သာမန်လူထုဟာ.. အလုပ်တွေများ.. ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ်မို့.. မသိသလိုနေကြတာ.. သဘာဝကျပါတယ်..။
သူတို့ကိုပြောတာ.. ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: (သာမန်လူထုဟာ.. အလုပ်တွေများ.. ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ်မို့.. မသိသလိုနေကြတာ.. သဘာဝကျပါတယ်..။
ကိုယ့်ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ကိုယ် ပေါ်လွင်လာကြတာတွေကြောင့်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .သာမန်လူထုဟာ.. အလုပ်တွေများ.. ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ်မို့.. မသိသလိုနေကြတာ.. သဘာဝကျပါတယ်..။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကို ခိုင် မမ နဲ့ ကိုမိုက်တို့ရေ
kai says: ဆိုတော့….
ရာမည says: အိုဗျာ